Tareenka Socdaalku Waa Habka Ugu Eco-Saaxiibtinimada Badan Ee Loogu Safro Yurub. Maqaalkani waxa uu ugu qoran tahay in wax lagu baro oo ku saabsan tareenka Travel by Save A tareenka, The Bogagga Tikidhada Tareenka ee ugu Jaban Adduunka.
Naadiyada ugu wanaagsan ee ka jira magaalada Berlin waa kuwo ku qarsoon aagga warshadaha ee Berlin iyo wadooyinka tareenka. Isu diyaari xaflad aan waligeed istaagin, ama istaago kaliya marka ninka ugu dambeeya uu istaago. Habeenada naadiga Berliners waxay bilaabataa sidii hore 1 waxaan ahay Sabtida ilaa Axada habeenka. This definitely puts Berlin in the craziest and best party cities in Europe with tourists and clubbers traveling from all over the world.
Inta lagu jiro maalinta iyo saacadaha qoraxdu, Budapest waa daah faneed quruxsan oo leh qurux badan iyo qaab dhismeedka dhismaha. Sidaad u warwareegtay hareeraha waddooyinka, indhahaaga ayaa si dhib yar ula socon kara meelaha ugu quruxda badan Yurub. laakiin, habeenkii waxaad ogaan doontaa adduunyo kale, a world of derelict buildings that turn to Europe’s most unusual bars, iyo muuqaalkan gaarka ah wuxuu gelinayaa Budapest 5 magaalooyinka xafladaha ee ugu wanaagsan Yurub.
Prague waa mid kamid ah magaalooyinka ugu quruxda badan Yurub. Inta lagu jiro maalinta waxaad dareemi doontaa inaad dib ugu soo noqotay wakhtigii qalcadaha, amiirrada, and knights stories, laakiin inta lagu jiro habeenkii waxaad waqti u safartaa nolosha waalan, halkaas oo caqabadaha looga tegay albaabka gadaashiisa.
Halka Nederlandku doorbidaan shirarka furaha hooseeya, hadaad weydiiso dalxiisayaal ka kala yimid daafaha dunida, waxay dhihi lahaayeen Amsterdam waxay leedahay dhinac kale. Marka la barbardhigo magaalooyinka kale ee ku yaal magaalooyinka ugu xafladaha wanaagsan Yurub, Amsterdam, waxaad ka heli doontaa dhawaaqyada riyada ee naadiyada badankood, laakiin sidoo kale music live. Bandhigyada tooska ah ayaa caan ka ah Amsterdam.
Magaalada aan dhamaanteen ku ognahay howlaheeda opera iyo nolosheeda dhaqameed ee aan horay loo arag sidoo kale waxay leedahay nolol cawee oo heer sare ah oo xiiso leh. Ka soo horjeedda muuqaallada habeenkii lagu caweeyo ee dalalka deriska ah, goobta nolosha ee Vienna waa saaxiibtinimo badan oo deggan. Tusaale ahaan, khidmadda laga soo galo Vienna way hooseysaa iyada oo siyaasadaha albaabku nasanayaan.
Khidmada gelitaanku way ku kala duwan tahay waddan ilaa waddan. Inta badan magaalooyinka Yurub waa dad aad u jaban, tusaale ahaan, Prague iyo Budapest, 5-20 euros entrance and alcohol at reasonable prices, meelaha qaarkood qaalisan yihiin, laakiin waxa ugu muhiimsan, waa inuu goor hore yimaadaa, sidaa darteed ma aha inaad saf dheer gasho.
Miyaad dooneysaa inaad ku dhejiso bartayada internetka "5 Magaalooyinka Ugu Fiican Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https:// www.saveatrain.com/blog/best-party-cities-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)